EyoMsintsi 12, 2016 by okwenyaniWW, Iimbono zizonke:
Ungabhengeza njani ukusebenzisa uluhlu lwamagumbi? Uninzi lwezihlu zamagumbi lufumaneka namhlanje kwiisayithi ze-Intanethi. Ke, lonke ulwazi luyafumaneka kwifomathi ye-elektroniki. Abanye abantu basebenzisa indlela endala eqinisekisiweyo yokubeka uluhlu lwamagumbi kwindawo leyo ifumaneka kuyo indlu. Umqobo omkhulu wale ndlela kukuba iphepha alizukuhlala ngaphezulu komhla omnye, ngenxa yoko asinakulindela inzala eqhubekayo kubathengi abanokubakho.
Iiarhente zeearhente zeearhente zoMhlaba zingawushenxisa ngokupheleleyo umnini wepropathi ekutsaleni. Ummeli ngokwakhe uya kuthetha-thethana nomthengi, abonise amagumbi, ahlole amaxwebhu ayimfuneko. Kodwa iyimfuneko ukuhlawula intlawulo efanelekileyo kwezi nkonzo.
Olu khetho lufanelekile kumnini wegumbi elihle ngohlaziyo olutsha, olulindele ukuba luhlawulwe ngaphezulu komndilili wentengiso.
Akukho zifom zikhethekileyo zoluhlu lwamagumbi, kodwa abanini bazama ukulandela iipateni ezithile, bebonisa olona lwazi lufunekayo.
Jonga umzekelo we uluhlu lweeflethi apha
Yintoni ekufuneka uyicacisile?
Ungabhala njani uluhlu lwamagumbi athengiswa ngumnini? Kuya kufuneka uqale ngokuthi amagama athi “iarhente yokuthengisa” kunye nenkcazo yeempawu zezindlu nomhlaba: inani lamagumbi, ubungakanani bendlu, nokuba yindlu yangasese eyahlukileyo, ibhalkhoni ukuba ikho.
Chaza idilesi kunye nenkcazo emfutshane yezinto ezikufutshane eziluncedo: iivenkile ezinkulu, iipaki, izitishi zangaphantsi njalo njalo. Njengomthetho, abanini bathula cwaka malunga nezo zinto, ezinokunciphisa iindleko zokuhlala: amashishini akufutshane nasekhaya, iitreyini zikaloliwe.
Chaza ngokweenkcukacha izibonelelo ezifanelekileyo ezikwindlu yakho: umgangatho wokulungiswa, ifenitshala ethile, iseti esemgangathweni yezixhobo zasendlini (umatshini wokuhlamba, imicrosrowave, umabonwakude njalo njalo), nokuba ngaba i-wi-fi ikhona. Unokwenza uluhlu lwezinto zamagumbi okuthengisa ezithengiswayo.
Uluhlu lwezindlu kufuneka lube linjongo. Sukuchaza ukuba indlu ayiphathi ngokungekhoyo. Umnini wexesha elizayo uya kwenzeka kwigumbi ukuya kwigumbi yedwa, ebukele ifanitshala kunye nococeko ococekileyo. Ukukhohlisa kuluhlu lwamagumbi kuya kukhokelela kwinto yokuba umthengi oza kubakho uya kuqala ukubonisana ngexabiso okanye uza kumka nje.
Qiniseka ukuba uchaza abafowunelwa abafunekayo kunye nendlela enqwenelekayo yonxibelelwano. Abathengi kunye nabameli beearhente zeearhente yokuthengisa izindlu baya kubiza rhoqo, ngamanye amaxesha kude kube sebusuku. Kwaye iifowuni ziya kuqhubeka nasemva kokuba uluhlu lwamagumbi luthe lwasuswa kwiindawo zokuthengiswa kwezindlu.
Akukho ngqiqweni ukubuza iiarhente zeearhente zokuthengisa okanye izindlu ukuba zingabizi inombolo engentla. Ii-arhente zisaza kunxibelelana nomnini wepropathi kwaye ziya kunikezela ngeenkonzo zazo, ziqinisekisa ukuba umthengi ofanelekileyo sele efunyenwe.
Zama ukuthatha imifanekiso yendlu yakho: igumbi, ikhitshi, igumbi lokuhlambela, indlela yeholo. Umsebenzi wekhamera ngoku unokwenza kunye neselfowuni. Ke ngoko, phantse zonke iindlu zamagumbi kwi-Intanethi ziboniswa iifoto zepropathi. Ukungabikho kolwazi oluyimifanekiso kuya kulumkisa umthengi ukuba athathe ingqalelo njengolu lokugqibela.
Yeyiphi indawo efanelekileyo yokuthumela uluhlu lwamagumbi athengiswa simahla? Namhlanje, uluhlu lwezindlu ezithengiswayo phantse luhlala lubekwe kwi-Intanethi. Awudingi ukuya ndawo, ukugqiba isivumelwano okanye ukuhlawula umrhumo. Ukwenza uluhlu lwamagumbi kuya kuthatha ngaphantsi kwemizuzu emihlanu. Ukongeza, unokufaka uluhlu lwakho lwamagumbi kwiwebhusayithi engaphezulu kwesinye.
Umnini wale ndlu kufanelekile ukuba alungele into yokuba abaThengi abanganyanisekanga "bathathe" indlu egameni learhente yabo, besebenzisa idatha kunye neefoto ezivela kwintengiso. Kule meko, khalaza ulawulo lwendawo malunga noshicilelo olo.
Zeziphi iiwebhusayithi ezinokuthi zikhuphe uluhlu lwendlu ngamaxabiso emali? Uluhlu lweendawo ezihlawulelweyo lukhonzwa kuphela ukuba umnini ufuna ukubonisa umyalezo wakhe okanye awuphakamisele kwindawo yokuqala kwiziphumo zokukhangela. Ezi zibizwa ngokuba zizo "iintengiso zepremiyamu" zenzelwe le njongo.
Olu khetho lufanelekile kwabo bathengisi abafuna ukufumana ngokukhawuleza abathengi beepropathi zabo.
Uluhlu lwamaphephandaba ngokuthe ngcembe lubuyela kwakudala.
Emva kokupapashwa kwedatha emalunga nefulethi, umniniyo kufuneka abe nomonde. Uya kufumana iifowuni ezininzi ezivela kubathengisi, abarhwebi ixesha elide ngokubhekisele kwixabiso kunye neemfuno ezingaphelelanga zabaqeshi ezizayo. Ukuthengiswa kwepropathi ayisiyengeniso kuphela, kodwa kunye nomsebenzi.
5 ngenxa ye 2 iivoti
Ukuhanjiswa kweeNdawo zeeVenkile
Ukupapasha uluhlu lwezindlu kwiwebhusayithi yethu simahla nceda ulandele eli phepha. Uluhlu lodweliso lwezindlu kufuneka lucelwe, kungabi njalo
okwenyaniWW Septemba 12, 2016
Olu ngeno yafakwa kwi Intengiso yeNtengiso yePropathi noqhotyosho Intengiso yeeVenkile, Intengiso yeeNdawo zaMahala, Izindlu zeNtengiso, Intengiso yeeVenkile, Uluhlu lwegumbi, Intengiso yeeVenkile, Intengiso yeeVenkile, Uluhlu lweeVenkile, Uluhlu lweeVenkile zeRhafu, Iintengiso zasimahla zeeVenkile, IiVenkile zentengiso zasimahla, Intengiso yasimahla yeeNdlu, Intengiso yamahhala ye-Apartment, IiWebhusayithi zeNtengiso yeeNdawo zasimahla, Uluhlu lwamahhala lweNdlu, Uluhlu lweZindlu eziSimahla, Uluhlu lwasimahla lweZindlu, Uluhlu lweArhente yeZindlu zeHlabathi, Uluhlu lweeNdawo zeZindlu amaZwe simahla, Uluhlu lweeVenkile, Uluhlu lwentengiso yearhente, Uluhlu lweNdawo yeNtengiso ye-Intanethi, Thumela Uluhlu lweeNdawo zokuThengisa, Uluhlu lwePropati, Uluhlu lweArhente yeArhente yeNtengiso, Uluhlu lweearhente zentengiso, Uluhlu lweNkampani yeZakhiwo, Uluhlu lwezezindlu, Uluhlu lweearhente zentengiso, Uluhlu lweeNtengiso zeNtengiso, Uluhlu lweeNdawo zeZindlu simahla, Uluhlu lweearhente zeZakhiwo kwi-Intanethi, Uluhlu lweeNdawo zeNdawo zokuThengisa izindlu, Uluhlu lwentengiso, Zentengiso, Apho Ungathumela Uluhlu lweeNdawo zeeNdawo zisimahla. Bookmark le Permalink.
Septemba 1, 2016 Uluhlu lweearhente zeeNdawo. Inethiwekhi yamanye amazwe - i-realWW i-realtyWW yindawo yokuthengisa iwebhusayithi yokuthengisa izindlu nomhlaba. Ukuthumela uluhlu lwezindlu nomhlaba nceda ulandele eli phepha Abanikazi, benqwenela ukutsala ingqalelo ephezulu kuludwe lweepropathi zabo, bahlala bethathela ingqalelo kakhulu kwiingcamango zokuyila kwaye abacingi ngokuchaneka kokudityaniswa koluhlu. Eli nqaku likwakuxelela ngezona zinto zibalulekileyo xa ubhala uluhlu lwezindlu. Ungabhala njani uluhlu lwezindlu nomhlaba. Isiseko seziseko Umbhalo wayo nayiphi na into yokwenyani […] exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi